I-e-LinkCare liqela elinomnqweno onamandla wokugcina amanqanaba aphezulu okwenza izinto ezintsha, ulwazi, ubuchwephesha bobuchwephesha, inkonzo.
I-e-LinkCare izimisele ekuboneleleni ngezisombululo zezifo zokuphefumla, izifo zentliziyo kunye nezifo zemetabolism.
Umbono wethu kukuba ngumboneleli wehlabathi kwisisombululo sesifo esinganyangekiyo kwicandelo lobungcali kunye nokunakekelwa kwasekhaya.
e-Linkcare iMeditech Co., Ltd. yinkampani ephezulu yezobugcisa eyakhiwe ngentsebenziswano phakathi kweLondon UK kunye neHangzhou China kunye nezixhobo zayo zokuvelisa ezizinze eXianju, Zhejiang, China apho senza uluhlu lwezixhobo zonyango kuyilo lwethu kubandakanya iAccugence TM Inkqubo yokujonga izinto ezininzi, UBREATH TM Spirometer Inkqubo njl.
Ukusukela ngala mhla wamiselwa, i-e-Linkcare Meditech Co., Ltd. izibophelele ekuphuculeni ulawulo lwezifo ezingapheliyo ngetekhnoloji yokusika, uyilo lomntu, ubuchule bokuvelisa obulawulwa kakuhle kunye nesisombululo esihlanganisiweyo sonyango lwezedijithali neselula. Sizabalazela ukusebenziseka okugqwesileyo, amava omsebenzisi agudileyo, kunye nentsingiselo eqhubekayo njengenjongo yethu.
e-Linkcare iMeditech Co., Ltd.ineqela elizinikeleyo nelinamava labasebenzi lokuqhuba i-R & D, ukuThengisa kunye nokuThengisa, liqela elinomnqweno onamandla wokugcina amanqanaba aphezulu ezinto ezintsha, ulwazi, ubuchwephesha bobuchwephesha, inkonzo ukuze kunikezelwe izisombululo ezihlanganisiweyo. Sijonge ukwakha ubudlelwane obuluqilima kunye nabathengi bethu kwixabiso lentlonipho nokuthembeka. Siqinisekile ukuba i-e-Linkcare Meditech Co., Ltd. ukuvavanywa kwamanqaku okhathalelo kunegalelo kukhathalelo lwempilo olungcono, ngokunikezela ngedatha oyifunayo, nini kwaye uyifuna phi, ukwenza izigqibo ezichanekileyo zokhathalelo lwempilo ngokukhawuleza. Yile nto sigxila kuyo. Ngelixa sisenza njalo, sizibophelele ngokufanayo ekuhlonipheni imigaqo-nkqubo yangaphakathi kunye nemimiselo yangaphandle.
IPneumotachograph Spirometer, 5.2 Igazi leswekile, Ikhithi yokuSimahla yeSwekile yeGazi, Umatshini wovavanyo lweSwekile yegazi, Iswekile Khangela uMatshini kweyona nkampani, Ukuzila ukutya kweGazi leShukela 100,